Ged cusub: Sheeko gaaban | Heeshi
Ged cusub: Sheeko gaaban
Khamiis, Diseembar 1, 2011 ·	by Idiris M. Cali ·	in Sheekooyin	· Faallo u dhaaf
Wax ka badan soddon mirir ayaan taagnaa, oo aan sugayey baskii 93-da oo faras-magaalaha Boston ku jeeda. Dhaxan baasi iyada oo ay i kojisay ayaan si kadis ah u jalleecay bar aan dhawr jeer oo hore ka quustay eegmadeeda mise waaba baskii oo soo lalaya! Duca-qabtaa waddoo, waatan durbadiiba hortayda ku hojisay, oo ilinkii hore ee baska iga furtay. “Dhaxanta ka soo gal!” ayey igu salaantay. Anna “Naa Muxubbo maxaa idin bakhtiistay?” ayaan, Aniga oo qadaadiic ku guraya sanduuqa agteeda ku rakiban, su’aalay. War-celimaadyo waafiya iyo kolkaan diirrimaadka baska gudahiisa isla helay ayey qadh-qadhyadu i deysay. Hore uma gudbi karin, oo basku waa uu ciirciirayey. Lugtayda midig ayaana iiga baxsanayd xarriiqa hurdiga ah. Muxubboduna sheeko ayey ii kala dhig-dhigeysay, oo sida dirawallada kale ee baskan dharaaraha kale wada igu ma aysan dhago-barjayneynin weedha ah, “Ha soo dhaafin xarriiqa huruudda ah!” Laba hojismaad ka dib, baskii wuxuu hor istaagay Dugsiga Sare ee Charlestown. Koox fara-weyn oo ardey ah oo u jarmaadeysay dugsiga ayaa ilinka dambe ee baska iska shubtay. Faalal iyo firaaqo ayuu baskii soo baxay. Intii dad ahayd ee taag-taagneyd na mid ba kursi ayuu isku ballaarshay. Anna lawyada ayaa i xanuuna oo waa waxa i soo kallihiyaye, kursi ayaan isha ku day-daydey. “Naa Muxubbo kursigaas dambe ayaan u socdaaye, waa inoo mar kale war-warrankeennu!” ayaan kaga siibtay Muxubbo.
“Haddaan kuu sheego sababta aan kuula hadli waayey kolkii hore i fahmi maysid” ayey igu adkaysay.
Tilmaamayaal: Baraf, Boston, Darawal, Gaadhi, Nin, Qaboobe, Sheeko Gaaban, Soomaali, Wadahadal
← Tiraynta maansada
Haad duceeyay: Sheeko sii gaaban →